Daryeel bini'aadminimo oo baaxad weyn oo ay MSF ku dhex fulisey xaalad amaan daro gudihii lixdii bilood oo oogu horaysay sanadka 2009 - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Daryeel bini’aadminimo oo baaxad weyn oo ay MSF ku dhex fulisey xaalad amaan daro gudihii lixdii bilood oo oogu horaysay sanadka 2009
01.09.2009 | Taakulada Soomaalida
MSF - Dr. Mumina Afrax Hiraable , waaxda bukaan socod eegtada Muqdishu© MSF
MSF - Farxiyo Xussein Maxamed,oo ah kalkaaliso caafimaad , oo kusiineyso talo caafimaad cunug yar waaxda bukaan socod eegtada Muqdisho.Bishii koowaad 2009
Dagaalo xoogan oo u dhexeeyo kooxaha hubeysan ayaa sababay dhimashada boqolaal rayid iyo barakaca kumanaan kale qeybtii hore ee sanadkan 2009 .Waxaa intaas sii dheer abaaro jiitamay iyo cuno yari sii xumeysay xaalada horaan sii liidatay oo ay kujireen bulshada kunool tuulooyinka.Farqiqa u dhexeeya baahida daran ee Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho iyo hareeraheeda, iyo heerka waxqabadka bani’aadamnimada ayaa sii ballaaratey, taas waxaa badanaa keeney awoodda aadka u yar ee ay hay’aduhu u leeyihiin geynta gargaarka ee degaanka nabadgelyadiisu aadka u xun tahay ee ay rabshaduhu ka socdaan.
Lixdii bilood oo ugu horaysay sanadka 2009,Kooxda MSF ee soomaliya ayaa la kulantay dhacdooyin xaga amniga ah.Bishii afaraad labo shaqaalo ayaa lagu afduubay magaalada xudur ee gobolka Bakool, kuwaas oo la soo daayey tobon cisho kadib. Afduubkaasi kadib ayaa MSF waxay dareentay in ay sii wadi karin in ay u fidiso daryeel caafimaad oo tayo leh dadka kunool Bakool waxayna go’aansatay in ay xirto rugteedi oogu weyneed konfurta iyo bartamaha soomaliya iyo afar rugo caafimaad oo a ku kala yaaley Labaatan jirow, Ceel garas, Ceel barde iyo Raadbure.
Bishii lixaad mid kamid ah shaqaalaha MSF ayaa ku dhintey qarax ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan qaraxaas oo ay kudhinteen 30 qof oo kale. Dhuqeyn joogta ah, qarax iyo iska horimaadyada kooxaha hubaysan ayaa markasta ku ah carqalad hor taagan dadaalka ay MSF oogu jirto in ay u fidiso daryeel caafimaad oo tayo leh oo lacag la’aan ah bulshada kunool caasimada muqdisho.Bishii todobaad sanadkan 2009 MSF waxay kukhasbanaatay in ay hakiso howlihii ay ka waday cisbitaalkeeda caruurta iyo sedex rug oo ay ku laheyd waqooyiga muqdisho markii shaqaalaha ay carareen si ay nafahooda u badbaadiyaan.
Inkasto oo ay caqabaduhu jiraan,hadana MSF ayaa weli ah hay’adda ugu weyn ee adeega daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah ka bixisaa bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Dhamaadkii bishi lixaad /juun 1,509 shaqaala somaliyeed oo eey caawinayaan 90 shaqaale oo ku sugan Nairobi ayaa ku howlanaa fidinta daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, daaweynta nafaqo-xumada, siinta daryeel caafimaad iyo taageeridda dadka barakacay, qalliinka, qaybinta biyaha iyo gargaarka kale oo laga waday sagaal gobol oo dalka ka mid ah.
MSF – Fadumo Harai Mohamud, Nurse, at work in Mogadishu OPD. Faadumo Harai Moxamud ,oo ah kalkaaliso caafimaad , oo shaqo ka ga jirto waaxda bukaan socod eegtada Muqdisho
Intii u dhexeysay bisha kowaad ila iyo bisha lixaad sanadka 2009, kooxaha MSF waxa ay bixiyeen 376,114 la-talin caafimaad ee bukaan-socod ah, oo ay ka mid yihiin 163,909 la talin caafimaad oo la siiyey carruur shan jir ka yar. Haween ka badan 22,030 ayaa heley la-talin daryeelka caafimaad ee dhalmada ka hore waxaana in ka badan 13,312 oo qof ayaa bukaan-jiif ahaan loo dhigey cusbitaallada iyo xarumaha caafimaadka ee ay MSF taageerto, 3,373 oo qalliin ayaa la sameeyey, 1,975 ka mid ahina waxa ay ahaayeen dhaawacyo ka dhashey rabshad.Kooxaha caafimaadka ayaa daaweeyey 255 qof oo qaba cudurka halista ah ee la dayacay ee kala azar, in ka badan 1,423 qof oo laga daweeyey duumo (malaariya) iyo 664 oo qof oo bilaabey daawada qaaxada. Ku dhowaad 18,825 qof oo qaba nafaqo-xumo ayaa la siiyey daryeel cunto iyo daawo iyo In kabadan 125,000 oo iyana tallaallo la siiyey oo kamid yihiin 41,990 talaalka jadeecada.
Shaqaalaha MSF ayaa la tacaaleen gargaarka degdega ah (Emergencies).Billowgii 2009 dagaalo ka soo cusboonaadey Guri ceel iyo Dhusa mareeb ayaa sababay in kumanaan rayid ah ay ka qaxaan guryahoodi. MSF waxay balaarisay mashrucii joogtada ahaa ee ay ka fulinaysay goobahaas waxayna biloowday howlo ay ku gaarsiinayaso biyo iyo la tashi caafimaad dadka barakacay iyadoo adeegsanayso rugaha caafimaadka ee guurguura oo loo yaqaano mobile clinics.MSF waxaa kale oo ay latacaashay daaweynta daacuunka oo ka dilaacay jubbada hoose halkaas oo ey MSF ku dawaysay 869 bukaan iyo Jowhar iyo Mahadaay oo ka tirsan shabeelada dhexe oo lagu daweeyey 61 qof .MSF waxaa ay ka bilaawday olole ee talaalka jadeeda baaxad wayn beledweyne ee gobolka Hiiraan. 26,463 caruur da’doodu kayartahay shan sano jir ayaa latalaalay.MSF waxa kale oo ay bilaabeysaa olole talaalka jadeecada oo la gaarsiin rabo 12,000 caruur da’doodu ka yartahay 5 sano gobolka shabeelaha dhexe.
MSF – Mohamud Macalim Abdulle Vaccinating a child during a nutritional survey. Maxamud Macalim Cabdulle oo talaalayo cunug yar xiligii dul meerka nafaqeynta
MSF oo joogtay Soomaaliya ilaa 1991, waxa ay mashaariic ka kala wadaa:
Waqooyiga Muqdisho – Waqooyiga Muqdisho MSF waxa ay ku haysay mid ka mid ah goobaha caafimaadka dadweynaha laga soo bilaabo 1994. Sanadkii 2007, MSF waxa ay saddex bukaan-socod-eegtada carruurta oo kale ay ka furtey degaannada Kaaraan, Cabdicasiis (Liido), nawaaxiga Baalcad iyo sidoo kale xarun bukaan-jiif carruurta ah oo 50 sariirood qaada oo laga furey Cabdicasiis. Bishii lixaad ee sanadkan 2009 dagaal lixaad leh awgiis MSF waxay ku qasabnaatay in ay hakiso howlihii ay kawaday cisbitaalka iyo bukaan-socod eegtada.
Degaanka Daynile – Mashruuca MSF ee cisbitaalka Dayniile, oo sagaal kiilomitir waqooyi ka xiga caasimadda, waxa uu qalliin iyo daryeel nafta lagu badbaadinayo siiyaa dadka ku dhaawacmey dagaallada. Cusbitaalka oo dayactir ballaaran lagu sameeyey waxa uu ka kooban yahay 59 sariirood, waxaana lagu qalabeeyey laba saalo oo qalliin, qol daryeelka degdegga ah iyo meel bukaanka ay ku sugaan iyo qayb daryeelka xooggan (intensive unit). MSF waxa ay sidoo kale dhaqaale ku taageertaa shaqada guud ee cusbitaalka iyada oo siisa agab caafimaad.
Magaalada Diinsoor MSF waxa ay ku haysaa Waax Bukaan-jiif ah oo leh 65 sariirood, taas oo u adeegta dhammaan dadweynaha degmadaas oo lagu qiyaasey 110,000 oo qof. Waaxda bukaan-jiifka waxa ay bixisaa daryeelka daawada; waxqabadyada qalliinka ee nafta lagu badbaadiyo oo uu ku jiro qalliin-kaga-dhalinta; daaweynta qaaxada iyo kala azar; iyo quudin ku daweyn carruurta ay hayso nafaqo-xumada ba’an iyo cudurada la socoto.
MSF – Nacimo Barre Mohamud, pharmacist, at work in the OPD in Mogadishu. January 2009. Naciimo Barre Maxamud,oo ah farmashiiste, oo shaqo ka ga jirto waaxda bukaan socod eegtada Muqdisho.Bishii kowaad 2009
Inta aynan xirin dhamaadkii bisha 6-xaad ee sanadkan 2009, MSF waxay maamulaysay xarun caafimaad oo 293 sariirood leh oo ku taallo magaala-madaxda gobolka Bakool ee Xuddur, taas oo u adeegta dad ku dhow 250,000 qof. MSF waxa ay maamushaa waax bukaan-socod oo leh qayb dhalmada iyo caafimaadka carruurta ah, waax bukaan-jiifka ah oo ka kooban qaybo dadka waawayn iyo carruurta kala ah, qayb cudurka kala azar ah, qayb cudurka qaaxada ah, bukaan-socod-eegto iyo xarun cunto-ku-daweyn. MSF waxa ay sidoo kale maamushaa afar rugo caafimaad, saddex ay ku leedahay gobolka Bakool iyo mid ay ku leedahay gobolka la deriska ah ee Baay
Cusbitaalka Istarliin ee 80-ka sariirood qaada ee magaalada Guriceel, MSF waxa ay adeegyo bukaan-socod ku siisaa dadka wayn, iyo carruurta iyo adeegyo bukaan-jiif oo ay ku jiraan qayb carruurta ah, qayb cudurada haweenka ah; qayb caafimaadka umulaha ah iyo qolka dhalmada; saalada qalliinka iyo qaybta qalliinka; adeeg shaybaar iyo raajo. Adeegyada ka hortagga, sida daryeelka dhalmada ka horreeya iyo tallaalka, ayaa iyana la bixiyaa. Intaa waxaa dheer, MSF waxa ay laba rugo caafimaad ku leedahay Galgaduud: Mid xarunta gobolka ee Dhuusa Mareeb ku yaalla, iyo mid laga furey Xiindheer bishii Jannaayo ee 2008da.
MSF waxa ay mashruuc ka dhex waddaa cusbitaalka gobolka ee qaada 99-ka sariirood ee magaalada Baladweyne iyada oo halkaa daryeel caafimaad oo heer sare ah ku siisa 280,000 oo qof oo deggan gobolka. MSF waxa ay bixisaa qalliin degdeg ah iyo mid ikhtiyaari ah, daryeelka dhaawaca, daryeelka carruurta, daaweynta nafaqo-xumada ba’an, waxaana ay u diyaar tahay in ay wax ka qabato xaaladaha caafimaad ee degdegga ah ee gobolka ka dhaca.
Gobolka Jubbada Hoose:
MSF waxa ay daryeel caafimaad oo aasaasi ah, mid sare iyo mid degdeg ah ka bixisaa magaalooyinka Mareerey iyo Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose.
Mareerey – waxqabadyada waxaa ka mid ah daryeelka bukaan-jiifka carruurta, daryeelka xaaladaha caafimaad iyo kuwa dhalmada; ka umulinta oo ay ku jirto daryeelka degdegga ah ee uureyda iyo umulaha; quudinta daaweynta iyo tan dheeriga ah; qalliinka (badanaa haweenka uurka ah iyo umusha); adeegyada bukaan-socodka ee daaweynta iyo kuwa ka hortagga iyo daaweynta qaaxada.
Jamaame – waxqabadyada waxaa ka mid ah bukaan-socod-eegto; waax bukaan-jiif oo daryeesha xaaladaha caafimaadka iyo haweenka uurka ah iyo umusha, oo ay ka mid tahay foosha lagu dhibtoodo, iyo nafaqo-xumo ba’an; baaritaanka nafaqada; barnaamijka bukaan-socodka quudinta, iyo u dhug lahaansho qorsheysan oo lagu sameeyo xaaladaha degdegga ah ee quudinta iyo cudurada faafa ee dilaaca; u diyaar-garowga xaaladaha degdegga ah.
MSF waxa ay daryeel caafimaad oo aasaasi ah ku bixisaa afar xarun caafimaad oo ku yaalla degmooyinka Jowhar,Mahaddaay iyo Balcad. Xarumaha caafimaad waxa ay bixiyaan adeegyo bukaan-socod oo isugu jira daaweyn iyo ka-hor-tag; daryeelka hooyada iyo dhallaanka; iyo barnaamij tallaal oo lagu ballaariyey xarumo caafimaad oo aan guurin iyo kuwo guura. Qayb caafimaadka hooyada ah aya bixisa adeegyada dhalmada caadiga ah; qalliin kaga umulinta; qorsheynta qoyska iyo daryeelka dhibanayaasha rabshadaha kufsiga. Waxaa sidoo kale jira barnaamij nafaqeyn oo ay ku jirto xarun baxnaanin iyo mid daryeel bukaan-socod.
Degaanka Xaawo Cabdi ayaa MSF waxa ay ku caawisaa xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay waxaana ay maamushaa waax bukaan-socod, waax bukaan-jiifka carruurta, xarun daaweynta daacuunka, barnaamij nafaqeyn, biyo dhaamin iyo qaybinta bustayaal iyo agabka aan cuntada ahayn.
MSF waxa ay bixisaa adeegyo bukaan-socod oo daaweyn iyo kuwo ka-hortag, oo ay ku jiraan daryeelka hooyada iyo tallaal; bukaan-jiif; daryeelka carruurta; daryeelka hooyada oo ay ku jiraan daryeelka degdegga ah ee haweenka uurka ah iyo umusha; quudin ku daaweynta; daaweynta qaaxada; qalliinka dhaawacyada la xiriira rabshahada; iyo u diyaar-garowga xaaladaha degdegga ah ee Cusbitaalka Koonfurta Gaalkacayo. Isbitaalka waqooyiga gaalkacyo, MSF waxay ka bixisaa daawaynta qaaxada iyo quudin ku dawaynta.
Tags: caafimaad, dagaal, Muqdisho, Somalia